रेफरल स्पाम ब्लक गर्न विकल्पको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ? Semalt विशेषज्ञ बाट सल्लाहहरूको लागि तल जानुहोस्
तपाईंले गुगल एनालाइटिक्समा रेफरल स्पाम देख्नु भएको हुन सक्छ। यसले इन्टरनेटमा साइटको दृश्यतामा क्षति पुर्‍याउँछ र तपाईंको रिपोर्टमा केही समयमै जंक हुन सक्छ। यसबाहेक, रेफरल स्पामले प्रयोगकर्ताहरूको लागि धेरै समस्याहरू सिर्जना गर्दछ र इन्टरनेटमा तपाईंको समय बर्बाद गर्दछ। योसँग तपाईंको मार्केटिंग रणनीतिहरूलाई ठूलो हदसम्म स्केच गर्ने क्षमता छ। रेफरल स्प्याम नयाँ शब्द होइन। यो बर्षौंदेखि भएको छ, र Google र मार्केटरहरू द्वारा यसलाई छुटकारा पाउन विभिन्न सुझावहरू प्रदान गरिएको छ।
रेफरल स्पामको परिचय
Semalt को एक शीर्ष पेशेवर निक Chaykovskiy, रेफरल स्पाम को बारे मा यस चाखलाग्दो लेख तयार गर्नुभयो, हामीलाई उपयोगी जानकारी र यसको रोकथाम गर्न को लागी सल्लाह प्रदान। यो दुई प्रकारमा विभाजन गरिएको छ: क्रलर रेफरल स्प्याम र भूत रेफरल स्प्याम।
भूत रेफरल स्प्यामको उत्पत्ति हुन्छ जब स्प्यामरले बेकार डाटा सिधा तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खातामा मापन प्रोटोकल मार्फत तपाईंको साइट भ्रमण नगरीकन पठाउँदछ। रेफरल स्पामले तपाइँको साइटलाई कहिले पनि भ्रमण गर्दैन, तर हिट सधैं Google विश्लेषक रिपोर्टमा देखाईन्छ। क्रोलर रेफरल स्प्याम तब हुन्छ जब केहि स्प्यामले तपाईंको साइट भ्रमण गर्दछ, र बाउन्स रेट प्रतिशत प्रतिशतको रूपमा देखाइन्छ।
के तपाइँसँग डेटामा स्प्याम छ?
रेफरल स्प्यामले तपाईंको वेब ट्राफिकमा स्पाइकहरू सिर्जना गर्दछ र यसलाई व्यवहार गर्न गाह्रो छ। तपाईं, तथापि, स्प्यामरहरू र ह्याकरहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ जो तपाईंको गुगल एनालिटिक्स रिपोर्टमा ती दृश्यहरू देखाइएको हुन सक्छ। यसको लागि तपाईंले गुगल एनालिटिक्समा अधिग्रहण सेक्सनमा जानुपर्नेछ र तपाईंको सबै सन्दर्भहरू अवलोकन गर्नुहोस्। यदि तपाइँ यी कुनै पनि वेबसाइटहरू देख्नुहुन्छ भने, तपाइँले त्यसलाई तुरून्त रोक्नु पर्छ। 4webmasters.org, बटन- for-website.com, यातायात monetize.org, webmonnetizer.net, घटना- tracking.com, darodar.com, र get-free-traffic-now.com रेफरल स्प्याम संसाधनको सामान्य उदाहरण हो।
यो खतरालाई बेवास्ता गर्नुहोस्
विशेषज्ञहरूले धेरै हदसम्म कसरी रेफरल स्पामबाट छुटकारा पाउने बारेमा विभिन्न प्रश्नहरू उठाएका छन्। अधिकांश वेबमास्टरहरू रेफरल स्पामले उत्पन्न गरिएको डाटा विश्वासनीय छ भनेर विश्वास गर्छन् किनकि हिटहरू जहिले पनि गुगल एनालिटिक्समा देखाईन्छ। तर सत्य यो हो कि डाटा सुरक्षित छैन र स्वीकृत हुन हुँदैन।
रेफरल स्प्याम ब्लक गर्दै
तपाईको गुगल एनालिटिक्समा यो सकेसम्म चाँडो रेफरल स्पाम रोक्न आवश्यक छ। तपाईंको वेबसाइट र सबै उप-डोमेनहरू सुरक्षित गर्नु भनेको तपाईंको ईन्टरनेटमा बाँच्न सक्ने एक मात्र तरिका हो। सुरुमा, यसले सबै विधि र तरिकाहरू सिक्न केही समय लिनेछ। डिजिटल मार्केटरहरूले दावी गर्छन् कि तपाईं फिल्टरहरू सिर्जना गरेर तपाईंको डाटा सफा गर्न सक्नुहुनेछ। पहिलो चरण भनेको तपाईको गुगल एनालिटिक्स खाता आधिकारिक गर्नु र नियमित आधारमा रिपोर्ट जाँच गर्नु हो। अर्को चरण भनेको सत्रहरू सबै सफा गर्नको लागि IsReferralSpam विकल्प प्रयोग गर्नु हो। पछि, तपाईंले तपाईंको गुगल एनालाइटिक्स खातामा नयाँ डाटाको आधारमा रिपोर्टहरू बनाउनु पर्नेछ।
के तपाईको यातायात वैध छ?
यदि तपाईंसँग SEO बिना धेरै धेरै हिटहरू प्राप्त गर्न समस्या भएको छ भने, त्यहाँ सम्भावनाहरू छन् कि स्प्यामरहरूले तपाईंको साइटमा हिट गरेका छन्। तिनीहरूबाट छुटकारा पाउन उत्तम तरिका भनेको फिल्टरहरू सिर्जना गर्नु र उनीहरूको आईपी ठेगानाहरूलाई रोकिनु नै जति सक्दो चाँडो हुन्छ। त्यहाँ यस्तो सम्भावनाहरू छन् कि स्प्यामरहरूले तपाईंलाई प्रत्यक्ष ट्राफिक पठाउँदै छन्, तर यसको गुणस्तर सम्झौता गरिएको छ। प्रत्यक्ष ट्राफिक सामाजिक मिडियाबाट आउँदछ, र यो तपाईं भर पर्न सक्नुहुन्छ।